KUTHENI UBUDLELWANE BUKADWAYNE JOHNSON NOTATA WAKHE 'BUNZIMA' - UBOMI
UDwayne Johnson ucacisa ukuba kutheni ubudlelwane bakhe notata wakhe 'babunzima kakhulu'
UDwayne Johnson, oneminyaka engama-48 ubudala, wavuma malunga nobuntwana bakhe kukhenketho lwe-TCA lwe-TCA ngaphambi kokukhutshwa kwehlaya lakhe elitsha Iliwa elincinci.
Umdlali weqonga uthe ubudlelwane bakhe notata wakhe, uRoyy Johnson, babunjalo nzima kakhulu.
UJohnson ngaphambili wathi wayenombulelo kuzo zonke izifundo ezingathethekiyo azifundileyo ngothando lukayise olunzima.
UDwayne Iliwa likaJohnson ivula malunga nokuba umntwana wakhe wayibumba njani le ndoda ayiyo namhlanje. Kwitreyila entsha yehlaya lakhe elizayo le-NBC Idwala elincinci, umdlali weqonga ukhanyisa ulutsha, kwaye uthi ukuba undiqonde, kuya kufuneka uqonde apho ndivela khona.
UJohnson ukhumbula ukuchitha ixesha lokukhula kwakhe ebuntwaneni eHawaii, apho wakhuliswa khona Utata wakhe uRoyy Johnson kunye nomama uAta Johnson.
ingelosi # 222
Kum, utata wam wayeligorha, watsho uJohnson ngotata wakhe ongasekhoyo, owayeyintshatsheli kwiintshatsheli. Ngamanye amaxesha, xa ukhula ujikeleza kwimilo, ufunda izifundo ngeendlela ezinomdla kakhulu, utshilo.
Kukhenketho lwe-TCA lwe-TCA ngolwe-Lwesibini, uJohnson naye wavuma ukuba ubuntwana bakhe babunzima kakhulu.
Ukukhula, kwaye uyazi ukuba siye ngqo nala maxesha ebomini bam awayechaza amaxesha aneminyaka eli-10 ubudala, 15, no-18, watsho, Abantu . Zininzi izinto phakathi kwaloo minyaka ezenzekayo ... kodwa kwakunzima, kwaye ubudlelwane endandinabo notata wam babunzima kakhulu.
UJohnson uqhubeke wachaza ukuba ubudlelwane babo buqhutywa luthando olunzima, olusuka ebuntwaneni bukaRocky. Utata wam wagxothwa kowabo eneminyaka eyi-13 kwaye wayengenakhaya, ke loo nto yabumba indoda eyandikhulisayo, utshilo. Kwaye kuloo ngxaki kweza ubomi obungaqhelekanga obabuzele kukuhamba. Ndandihlala kumazwe ahlukeneyo ali-13 xa ndandineminyaka eli-13 ubudala, ndihlala eNew Zealand.
Utata wakhe wasweleka nge-15 kaJanuwari ka-2020, kwaye uJohnson ngaphambili wavula kwi-Instagram malunga nokuba uRocky uthetha ntoni kuye.
Ndiyakuthanda. Uqhekeze izithintelo zemibala, waba yindumasi yentsimbi, kwaye walandela indlela yakho ngeli hlabathi, utshilo. Bendi yinkwenkwana ehleli ezihlalweni, ndikubukele kwaye ndikuncoma, qhawe lam likude. Inkwenkwe oyikhulisileyo ihlala izidla ngeenkcubeko zethu kwaye iyazingca ngokuba ndingubani kwaye ndingubani. Inkwenkwe oyikhulisileyo ngolona thando lunzima.
ndiyaziva ngeepenti zam
UJohnson uthe unombulelo ngazo zonke izifundo ezibalulekileyo awazifundiswa ngutata wakhe, kwaye uyathemba ukuba Iliwa elincinci iya kubonisa oko. Olu luhlu lundivumele, ngandlela thile, ukuba ndiwaxabise la maxesha anzima ngakumbi, utshilo.
Inombolo yengelosi engama-444
Ngaba ii-lymph node zidumbile nge-covid
zeziphi izihlangu ezilungileyo kwi-fasciitis yesityalo
ngu-333 inani leengelosi